ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) - အာသာစီကလာ့ (၁၉၁၇-၂၀၀၈) နဲ့ သူ့သိပ္ပံ၀တ္ထုများ မိတ်ဆက် - MoeMaKa Media
Home / Arthur C. Clarke / Dr Khin Maung Win (Maths) / Literature / Science Fiction / Translation / Variety / ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) - အာသာစီကလာ့ (၁၉၁၇-၂၀၀၈) နဲ့ သူ့သိပ္ပံ၀တ္ထုများ မိတ်ဆက်
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) - အာသာစီကလာ့ (၁၉၁၇-၂၀၀၈) နဲ့ သူ့သိပ္ပံ၀တ္ထုများ မိတ်ဆက်
Arthur C. Clarke, Dr Khin Maung Win (Maths), Literature, Science Fiction, Translation, Variety
(မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၉
အာသာစီကလာ့ကို ၁၉၁၇ တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ခေါမားစက်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် ငယ်စဉ်ကပင် သိပ္ပံနှင့် သက်ဆိုင်သော အရာအားလုံးကို စိတ်ဝင်စားသဖြင့် သူကိုယ်ပိုင် ကြိုးမဲ့ ကြေးနန်းစနစ်၊ အဝေးကြည့် မှန်ပြောင်းနှင့် ဒုံးပျံများကို ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ သူသည် သိပ္ပံ ဆိုင်ရာ မဂ္ဂဇင်း၊ ဝတ္ထုများကို စုဆောင်း ဖတ်ရှုခဲ့သည်။ ၁၉၄၁ မှ ၁၉၄၆ အတွင်းတွင် သူသည် ဗြတိသျှ လေတပ်တွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အရာရှိအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ တွင် သူသည် ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုများ (Commutations Satellite) များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း ဟောကိန်းထုတ်သော ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို ရေးခဲ့သည်။
ယခုအခါတွင် ကမ္ဘာကို မိုင်ပေါင်းငါးသောင်းအကွာလောက်တွင် လှည့်ပတ်နေသော ဆက်သွယ် ရေး ဂြိုဟ်တုများ ရှိပြီး ထိုပတ်လမ်းကို ကလာ့စ်ပတ်လမ်း (Clarke Ring) ဟု အမည်ပေးထား သည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် သူသည် ပထမဦးဆုံး သိပ္ပံဝတ္ထုတိုတခုကို ရေးသားခဲ့သည်။ နောင် နှစ်နှစ် ကြာသော် လန်ဒန်တက္ကသိုလ်တွင် ရူပဗေဒနှင့် သင်္ချာဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် ခရီး များစွာ သွားခဲ့ပြီး သိပ္ပံဝတ္ထုများစွာကိုလည်း ရေးခဲ့သည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကိုလံဘိုမြို့တွင် ကွန်ပျူတာများစွာနှင့် ခေတ်သစ် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း များစွာ အပြည့်ရှိသော အိမ်တွင် နေထိုင်သည်။
၁၉၄၈ တွင် သူ၏ သိပ္ပံဝတ္ထု 2001:A Space Odessy အတွက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းကို သူကိုယ်တိုင် ရေးသားခဲ့သည်။ သူ၏ အအောင်မြင်ဆုံး ဝတ္ထုများမှာ— The Sentinel, The Star, Transits of Earth, The Nine Million Name of God, Tales of the Ten World တို့ ဖြစ်ကြသည်။
သူသည် သိပ္ပံပညာနှင့် သိပ္ပံဝတ္ထုတို့၏ လမ်းဆုံရာကို အလွန်စိတ်ဝင်စားသည်။ သူ၏ သိပ္ပံဝတ္ထု များထဲမှ ဟောကိန်း တော်တော်များများသည် ယနေ့တွင် ဧကန်တကယ် ဖြစ်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၏ ဝတ္ထုသည် နောင်အနာဂတ်၏ အဖြစ်မှန် ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု သူ ယုံကြည်သည်။
၁၉၆၂ တွင် ကလာ့နိယာမ သုံးခုဟု အမည်တွင်သော နိယာမသုံးခုကို ရေးသား ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုနိယာမများမှာ-
(၁) အကယ်၍ သက်ကြီးရွယ်အို သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတဦးသည် တခုခုကို ဖြစ်နိုင်သည် ဟု ပြောလျှင် သူ ပြောတာ မှန်ဖို့များသည်။ အကယ်၍ သူက မဖြစ်နိုင်ဟု ပြောလျှင် မှား ဖို့ များသည်။
(၂) ဖြစ်နိုင်သောအရာ၏ ဘောင်ကို သိလိုလျှင် တနည်း၊ ဘယ်လောက်အထိ ဖြစ်နိုင် သည်ဟူသည်ကို သိလိုလျှင် ဖြစ်နိုင်သောဘောင်ကို ကျော်လွန်၍ မဖြစ်နိုင်သော နယ်ပယ်ထဲအထိ သွားကြည့်ရမည်။
(၃) အလွန်တိုးတက်သော နည်းပညာသည် မျက်လှည့်ပညာနှင့် ခွဲခြားလို့ မရပါ။
Tales of Ten World — ဆယ်ကမ္ဘာ ဝတ္ထုများမှ
အာသာစီကလော့ ရေးသော ဤဝတ္ထု ဆယ်ပုဒ်တွင် စာရေးဆရာသည် အနာဂတ်ကမ္ဘာကြီးကို စိတ်ကူးဖြင့် ပုံဖော်ထားသည်။ သူ၏ စိတ်ကူးတွင် ဒုံးပျံများဖြင့် အာကာသထဲကို လူများ ခရီးသွားနိုင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ၎င်းပြင် လနှင့် အခြားဂြိုဟ်များပေါ်တွင် အာကာသလေ့လာရေး စခန်းများ၊ သိပ္ပံစမ်းသပ်ခန်းများကို တည်ဆောက်ထားပြီ ဖြစ်သည်။ အာကာသခရီးသွားများ သည် အာကာသစခန်း၏ အပြင်ထွက်သည့်အခါတွင် အာကာသဝတ်စုံများ ဝတ်ရသည်။ အာကာသဝတ်စုံများထဲတွင် အသက်ရှနိုင်ရန် စီစဉ်ထားသလို ပြင်ပမှ လွန်ကဲသော အပူဒဏ်၊ အအေးဒဏ်တို့မှလည်း ကာကွယ်ပေးထားသည်။ အာကာသစခန်းအတွင်းတွင် ဝတ်စုံမဝတ်ဘဲ နေနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
ဤဝတ္ထုများ၏ နောက်ခံ နေရာဒေသများမှာ အမျိုးမျိုး ဖြစ်သည်။ ဝတ္ထုနှစ်ပုဒ်သည် ကမ္ဘာပေါ် တွင် ဖြစ်သည်။ ဝတ္ထုများထဲရှိ ဇာတ်ကောင်အများစုသည် အာကာသထဲသို့ ခရီးသွားပြီး ဂြိုဟ် နှင့် ကြယ်များကို စူးစမ်းလေ့လာသော သိပ္ပံသမားများ ဖြစ်ကြသည်။ အချို့သည် နက္ခတ္တပညာ ရှင်များ ဖြစ်ကြသည်။ နက္ခတ္တပညာရှင်များသည် အာကာသကို အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် ကြည့်ရှု လေ့လာကြသည်။
Summertime on Icarus (အိုက်ကာရပ်စ် နွေရာသီ) ဝတ္ထုသည် ဒုံးယာဉ်ငယ် (Space Pod) တခုထဲတွင် ဖြစ်သော အဖြစ်အပျက်တခု ဖြစ်သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်သည် ယင်းဒုံးယာဉ်ငယ် သည် ဂြိုဟ်ပဲ့ (asteroid) တခုပေါ် ရောက်သွားစဉ်က ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့် ကြာသပတေး ဂြိုဟ်တို့၏ ပတ်လမ်းကြားတွင် ဂြိုဟ်ပဲ့ပေါင်းများစွာ ရှိသည်။ အချို့မှာ သေးသည်။ အချို့မှာ တော်တော်ကြီးသည်။
Who’s There? (ဘယ်သူလဲ?) ဝတ္ထုသည် အာကာသစခန်းတခုထဲတွင် ဖြစ်သည်။ ထို အာကာသစခန်းမှာ ကမ္ဘာကို မိုင်ပေါင်း နှစ်သောင်းအကွာမှ ပတ်နေသော Satellite ကြီးတခု ဖြစ်သည်။
Dog Star (ခွေးကြယ်) ဝတ္ထုသည် လပေါ်ရှိ သိပ္ပံစမ်းသပ်ခန်းတခုတွင် ဖြစ်သော အဖြစ်အပျက် ဖြစ်သည်။
Into the Comet (ကြယ်တံခွန်ထဲသို့) ဝတ္ထုသည် ကြယ်တံခွန်၏အမြီးထဲတွင် လိုက်ပါသွားသော ဒုံးပျံယာဉ်ထဲတွင် ဖြစ်သည်။ ကြယ်တံခွန်သည် အာကာသထဲတွင် လှည့်ပတ်သွားနေသော အရာဝတ္ထုတခု ဖြစ်သည်။ ကြယ်တံခွန်၏ ထိပ်နှင့် အမြီးသည် မီးလောင်နေသည်။ ကြယ်တံခွန် သည် နေ၏အနားသို့ ရောက်လျှင် ကမ္ဘာမှ လှမ်းမြင်နိုင်သည်။ အထင်ရှားဆုံး ကြယ်တံခွန်မှာ ဟေလီ၏ ကြယ်တံခွန် (Halley’s Comet) ဖြစ်သည်။
Before Eden (အီဒင်မတိုင်မီ) ဝတ္ထုတွင် သောကြာဂြိုဟ် (Venus) သည် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းပြီး အက်ဒမ်နှင့် အိဗ် (Adam and Eve) နေထိုင်ခဲ့သော အီဒင်ပန်းခြံ (Garden of Eden) ပမာ ဖြစ်သည်ဟု စိတ်ကူးဖော်ပြထားသည်။ ဝတ္ထုတွင် သောကြာဂြိုဟ်သို့ သိပ္ပံပညာရှင်များ ရောက်လာပြီး သယ်ဆောင်လာသော ဘက်တီးရီးယားပိုးများကြောင့် ထိုဂြိုဟ်၏ သက်ရှိများ ပျက်စီးသွားသည်။
(၎င်း၀တ္ထုများကို စာရေးသူက ဘာသာပြန်ပြီး အပတ်စဉ် တင်ဆက်သွားပါမည်)
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) - အာသာစီကလာ့ (၁၉၁၇-၂၀၀၈) နဲ့ သူ့သိပ္ပံ၀တ္ထုများ မိတ်ဆက် Reviewed by MoeMaKa on 6:00 AM Rating: 5